Global Voices teny Malagasy » Costa Rica: Marary Iray Mitantara Ny Fiainany Manoloanan’ny Homamiadana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Jona 2018 12:20 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika (fr) i Norbert Bousigue, Vero
Sokajy: Amerika Latina, Costa Rica, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka
Vao nahafantatra fa tratry ny homamiadana ny bilaogera iray avy ao Costa Rica, ka nanapaka hevitra ny hizara teo amin'ny bilaogy  [amin'ny espaniola] ny tantaran'ny adiny tamin'ilay aretina, ary alohan'ny hitenenany azy amin'ny fianakaviana. Toa izao no nanombohan'ny tantarany :
Toy ny nandritra ireo taona marobe, rehefa akaikin'ny tsingerintaonako, nanao fanarahamaso ny fahasalamako aho. Ny 25 Jolay 2008, niteny ny dokotera fa misy aloka eo amin'ny saritaratry (radio) ny avokavoko, izay homamiadana. Tsy mpifoka mihitsy aho, raha tsy hoe tamin'ny fotoana nialako sàkana fony izaho 16 taona.
Mitohy miaraka amin'ny fihetsehampon'ny fianakaviany  [amin'ny teny espaniola] taoriain'ny nanambarany azy ireo ny momba ny aretiny ito bilaogy ito, mitondra ny anarana Diario de Un Enfermo de Cáncer (Diarin'ny Olona iray Mararin'ny Homamiadana)
Omaly, nanangona ny herimpoko aho ary niteny tamin'ny vady aman-janako fa voan'ny homamiadana. Azo antoka fa hiakatra ny vidin'ny petrabolan'ny Scott Paper , raha jerena ny habetsakin'ny Kleenex nampiasainay.
Fakàn-tàhaka ny vadiko. Be herimpo, na eo aza ny halemem-panahiny izay mahatonga ny olondrehetra hitia azy. Na dia nandatsa-dranomatso kely aza izy, dia tony mandrakariva ary nampahery anay rehetra. Mihevitra izy fa afaka resenay ilay homamiadana, ohatr'izay fotsiny, manondro ny rehetra, izahay rehetra. Tsy afaka hahatsiaro ho resy izahay. Satria tena tia baolina kitra ny tenako, niteny izy fa mbola ny antsasa-potoana voalohany no nifarana tamin'ny isa 0-1, ary mbola manana 45 minitra isika hanatrarana ny isa.
Na dia vao nanomboka aza ny bilaoginy, efa nahazo andiana firariana fahasalamana, ary fanehoankevitra hafa momba ny aretiny. Mbola nanoratra lahatsoratra iray hafa ny mpanoratra an'ilay bilaogy nialoha indrindra ny fandidiana azy, nanazavany fa tokony nofaniny mafy ny vadiny tamin'ny fitantanana ny volan'ny ankohonana, raha sanatria mitranga ny loza. Ho azy, io lahatsoratra io koa no ahafahany manazava fa eo alohan'ny mety ho fahafatesany, tsy matahotra ny ho faty izy, fa matahotra an'izay mbola tsy hitany na nataony  [amin'ny espaniola]:
Ny tsy niaina ela tsara mba “hahita ny fiafaràn'ny horonantsary” no tena mampiasa ny saiko izao. Mbola kely ny zanako, ary izy ireo no zavatra tsara indrindra nisy tamin'ny fiainako. Mety tia tena aho, fa tsy tiako ho banga na iray andro aza ny fahitako ny fiainan'izy ireo. Mbola te-hijanona hiara-tsambatra amin'izy ireo aho, mbola te-hanohy hihomehy amin'izay lazainy, hijery am-pahafinaretana ny talentany, raha fintinina, te- hijanona ao amin'ny fiainan'izy ireo aho.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/06/120323/
 mbola tsy hitany na nataony: http://canceroso.ticoblogger.com/2008/08/iv-maana-me-operan.html